शेयर बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट, कसको कति कारोबार भए ? हेर्नुस्:: Artha Dabali
शेयर बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट, कसको कति कारोबार भए ? हेर्नुस्
काठमाडौं / शेयर बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट देखिएको छ । साताको पहिलो दिन आइतबार नेप्से परिसूचक ११.२८ अंकले घटेर १२५८.२७ को विन्दूमा सीमित भएको छ ।
राम्रा कम्पनीमा बिक्री चाप देखिँदा सेन्सेटिभ इण्डेक्स १.८४ अंकले घटेको छ भने समग्र कारोबार मापक फ्लोट इण्डेक्समा ०.८१ अंकको गिरावट देखिएको छ । आइतबार ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स १.८७ अंकले घटेको हो ।
आज १७४ कम्पनीको १४ लाख ७३ हजार ८०८ कित्ता सेयर ४७ करोड २५ लाख २० हजार ८११ रुपैयाँमा किनबेच भएको छ भने ११ उपसमूहको सबैको कारोबारमा गिरावट देखिएको छ ।
बैंकिङ समूहेको ७.१३, होटल २७.५७, निर्जीबन बीमा १११.०३, जीवन बीमा समूहको उपसूचक ३५.४५ अंकले घटेको देखिएको छ ।
आइतबार बजारमा १७४ कम्पनीका १४ लाख ७३ हजार ८०८ कित्ता सेयर ४७ करोड २५ लाख रुपैयाँमा किनबेच भयो ।
नेपाल बैंकको २ करोड ९५ लाख ८० हजार रुपैयाँ बढीको सेयर कारोबार भएको छ । यस्तै दोस्रो र तेस्रो स्थानमा क्रमशः शिवम् सिमेन्ट र सिद्धार्थ बैंक रहेका छन् ।
यो दिन नेपाल एग्रो लघुवित्तका लगानीकर्ताले धेरै कमाए । यो कम्पनीको सेयर मूल्य ६.७५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ भने महिला सहयात्रा माइक्रोफाइनान्सका लगानीकर्ताले धेरै गुमाए । यो कम्पनीको सेयर मूल्य ८ प्रतिशतको हाराहारीमा घट्यो ।
यसका साथै, आज गणपति माइक्रोफाइनान्स, गुँरास लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताले कमाएका छन भने विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था, आँखुखोला जलविद्युत कम्पनीका लगानीकर्ताहरुले गुमाएका छन् ।